Global Voices teny Malagasy » Mitarika Ny Olona Hidina An-Dalambe Ny Fahalotoan’ny Rivotra Any Makedonia, Ary Misy Fampiharana iray Ho An’Izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Mitarika Ny Olona Hidina An-Dalambe Ny Fahalotoan'ny Rivotra Any Makedonia, Ary Misy Fampiharana iray Ho An'Izany
Voadika ny 22 Febroary 2016 11:27 GMT 1	 · Mpanoratra Adrijana Selmani Nandika miora
Sokajy: Makedonia, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Tontolo_iainana
Gorjan Jovanovski manatrika ny fihetsiketsehana teo anoloan'ny tranoben'ny governemanta Makedoniana ao Skopje. Ny 28 Desambra 2015. Sary avy amin'i Vanco Dzambaski (CC-BY-NC-SA).
Olona an'arivony no nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny tranoben'ny governemanta ao Makedonia ny 28 Desambra 2015, mitaky fepetra vaovao mba hampihenana ny fahalotoan'ny rivotra manempotra ny firenena. Ny mpandahateny voalohany  niatrika ny vahoaka dia i Gorjan Jovanovski, mpamorona ny fampiharana mifototra amin'ny Tranonkala  sy Android  “Moj Vozduh” (Ny Rivotro), izay mampiasa angon-drakitra misokatra mampiseho ny haavon'ny fahalotoan'ny rivotra manerana an'i Makedonia.
Nampijaly an'i Makedonia nandritra ny taona maro ny lenta avon'ny fahalotoana, indrindra fa ny tanànan'i Skopje  sy Tetovo , izay anisan'ny faritra maloto indrindra  any Eoropa. Tamin'ny 2012, nanao tatitra ny Global Voices  momba ny ezaka nataon'ireo mpikatroka mafàna fo mba hahatonga ny vokatry ny fanarahamaso ny kalitaon'ny rivotra ho hita maso kokoa, taorian'ny fanapahankevitry  ny manampahefana ao an-toerana hampitsaharana ny famoahana angon-drakitra amin'ny tranonkalam-pifandraisana..
Tamin'ny Desambra 2015, nanohy ny tsy firaharahahiana ny fitakiana fepetra vaovao manohitra ny fahalotoan'ny rivotra  ny Governemanta any Makedonia, nitarika ny fihetsiketsehana nataon'ireo fikambanana mpiaro tontolo iainana sy ny mpanohana azy. Taorian'ny fihetsiketseham-bahoaka tany Tetovo, ny olom-pirenena dia nanomana miaraka amin'ny teny filamatra “Tsy afaka miaina izahay,”  nanao fihetsiketsehana faobe tany Skopje  ihany koa taty aoriana.
Ny famerana ny fifamoivoizan'ny fiara ao afovoan'ny tanàn'i Skopje, ny fampidirana rafitry ny fifamoivoizana amin'ny andro hisian'ny lenta avo amin'ny fahalotoana, ny fandraràna ny fiara mampiasa solika ambanin'ny fenitra diesel “Euro 4 “, ary ny fampidinana ny vidin'ny tapakila ho an'ny fitateram-bahoaka no ampahany amin'ireo fepetra notakian'ny mpanao fihetsiketsehana sy ireo fikambanana momba ny tontolo iainana ao Skopje, Tetovo, Bitola, Kocani, Kicevo amin'ny manampahefana. Ireo mpanao fihetsiketsehana dia manizingizina fa tsy hitsahatra izy ireo mandra-pahatongan'ny tahan'ny vovoka mitondra homamiadana PM10 sy PM2.5 ho lasa ambanin'ny fetra ambony indrindra.
Ireo fikambanana momba ny tontolo iainana sy ireo fikambanana hafa dia nanome fetra farany ho an'ny manampahefana, mitaky fihetsehana, miatrika ny fandrahonana hetsi-bahoaka ataon'ny mpanao fihetsiketsehana izay mety hanakana ny tanàna voaloto rehetra.
Olom-pirenena tamin'ny fihetsiketsehana faobe manohitra ny fahalotoan'ny rivotra izay natao teo anoloan'ny governemanta Makedoniana ao Skopje (28.12.2015) Sary avy amin'i: Vanco Dzambaski (CC-BY-NC-SA).
Taorian'ny fihetsiketsehana, voadona mafy ilay fampiharana angon-drakitra misokatra “Ny Rivotro”. Nanazava  ny mpamorona Gorjan Jovanovski:
Nankalaza vao haingana ny tsingerintaonany voalohany ny “MojVozduh”! Natomboka tamin'ny Janoary 2015 izy io, fa ny famoronana azy dia nanomboka tamin'ny Desambra 2014. Hatramin'izao, manana mpampiasa maherin'ny 30.000 isan'andro izy, izay mitsirika ilay fampiharana hijereny ny hatsaran'ny rivotra ao amin'ny tanàna niavian'izy ireo. Lasa anarana maro mpahalala izy, ka ny ankamaroan'ny olona amin'ny alalan'ny smartphone dia mahalala ny atao hoe “MojVozduh”. Ny Android sy ny tranonkala no safidy voalohany ho an'ilay fampiharana, fa tsy ho ela dia hisy ny fampiharana ho an'ny iOS, ary koa ho an'ny Windows Phone!
Tamin'ny faran'ny volana Desambra 2015, nanatrika sy nanao kabary nandritra ny fihetsiketsehana aho, mikasika ny tsy firaikàn'ny governemanta amin'ny lenta avo amin'ny fahalotoana izay indraindray mahatratra hatramin'ny 10 heny miohatra amin'ny fetra napetraky ny EU. Indrisy anefa, nisy olona tsy tia ny fisiana sy ny fahatsiarovantena izay nateraky ny “Moj Vozduh”, ka tamin'ny fiandohan'ny Janoary 2016, namely ilay fampiharana tamin'ny Distributed Denial of Service Attack (DDoS), ka amin'ireo fangatahana mahazatra 200.000 natao isan'andro ao amin'ny lohamilina, io andro io izahay dia nahazo maherin'ny 38 tapitrisa (27 tapitrisa tamin'izany no napetraky ny mpamatsy anay tao amin'ny ‘cache’, ary nanampy ahy tamin'ny tsy fampandoavana azy ireny, fa ny 9 tapitrisa dia nosoratana tamin'ny kaontiko). Soa ihany fa afaka nanavotra ny angon-drakitra aho, namindra izany any amin'ny lohamilina mitombina kokoa ary nametraka sosona fiarovana fanampiny teo amboniny. Nahasarika olona maro ny antso tolo-tànana izay natao, ary voahangona tao anatin'ny 48 ora fotsiny ny vola izay nahasahana ny fandaniana rehetra nitranga hatramin'izao ka hatramin'ny nanombohana ny “Moj Vozduh”, ary na ny nandritra ilay fanafihana aza.
Vao haingana, nampangain'ny  Minisitry ny Tontolo Iainana ny “Moj Vozduh” fa hoe diso ny angon-drakitra voalaza tao, ka mampanahy ahy, satria ny angon-drakitra dia nalaina avy hatrany tao amin'ny lohamilin-dry zareo, ary tsy nisy fanovàna natao taminy hatreo amiko.
Tena antenaiko tanteraka fa ho io no taona farany ahitàna rafy avobe amin'ny fahalotoana aty Makedonia, kanefa raha tsy isika rehetra no mandray fepetra avy hatrany,dia hijanona fotsiny ho fanantenana manjavozavo ho antsika rehetra ny hoavy madio.
Anisan'ny manana fahalotoan'ny rivotra ambony indrindra any Eoropa i Makedonia, mitarika loza ara-pahasalamana mahatsiravina izany. Miady isan'andro amin'ny fahalotoan'ny rivotra ny mponina, indrindra fa ireo izay mipetraka amin'ny tanàna lehibe. Ny angon-drakitra nomen'ny fampiharana “Moj Vozduh”  dia mampiseho fa Tetovo—iray amin'ireo tanàna maloto indrindra ao Makedonia tamin'ny 2015—dia, raha lazaina amin'ny fomba ofisialy, voaloto 350 andro ao anatin'ny taona.
Natao tany amin'ireo tanàna lehibe indrindra any Makedonia: Skopje, Tetovo sy Bitola  ny fihetsiketsehana manohitra ny fahalotoan'ny rivotra tamin'ny 2015 sy 2014. Tamin'ny 2014, an-jatony ny mponina tao amin'ny faritra avaratra andrefan'i Makedonia no nanohitra ny fanapahankevitry ny governemanta momba ny fanemorana indray ny fe-potoana ho an'ny orinasa fandrendreham-bý Jugohrom mba hametrahany tantavana miaro amin'ny fandotoana ho an'ireo lafaorony lehibe fito ao Tetovo, ilay tanàna maloto indrindra.
Olom-pirenena tamin'ny fihetsiketsehana faobe manohitra ny fahalotoan'ny rivotra izay natao teo anoloan'ny governemanta Makedoniana ao Skopje. Tamin'ny 28 Desambra 2015. Sary avy amini Vanco Dzambaski, nahazoana alalana.
Ny fampiharana “Ny Rivotro” dia manangona sy mitahiry angon-drakitra azo avy amin'ny toby izay tantanan'ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy Fanajariana , manova izany ho angon-drakitra misokatra – kintana-5 . Manaraka izany dia asehony ny torohay mba ho azon'ny besinimaro fantarina. Azo ampiasaina amin'ny teny Makedoniana, Albaney, ary Anglisy ilay fampiharana. Raha mihetsika fotsiny amin'ny fahalotoana ny ankamaroan'ny olona rehefa afaka “mahita sy miaina ny rivotra” izy ireo, tokony ho marihana fa ny zavona dia tsy mitovy amin'ny smog (setroka miampy zavona), ary tsy azo faritana afa-tsy amin'ny alalan'ny fitaovam-pandrefesana sahaza izany ny tena fahalotoana.
Fampiasana ny fampiharana “Ny Rivotro” amin'ny andro misy masoandro ao Skopje. Sary avy amin'i Dona Dzambaska, CC 2.0.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/22/78700/
 mpandahateny voalohany: http://a1on.mk/wordpress/archives/565817
 maloto indrindra: http://www.independent.mk/articles/23759/Macedonian+City+of+Tetovo+Declared+Most+Polluted+Urban+Area+Globally
 nanao tatitra ny Global Voices: https://globalvoices.org/2012/02/29/macedonia-skopjes-pollution-monitoring-saga-continues/
 fahalotoan'ny rivotra: http://meta.mk/en/skopje-bitola-i-tetovo-i-deneska-se-zadushuvaat-a-nikoj-ne-se-potresuva/
 miaraka amin'ny teny filamatra “Tsy afaka miaina izahay,”: https://www.facebook.com/events/501972323309086/
 fihetsiketsehana faobe tany Skopje: http://meta.mk/en/protest-stop-the-pollution-or-we-block-all-major-cities-on-january-the-15th/
 angon-drakitra nomen'ny fampiharana “Moj Vozduh”: http://blog.mojvozduh.eu/2016/01/13/a-2015-review/
 toby izay tantanan'ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy Fanajariana: http://airquality.moepp.gov.mk/
 angon-drakitra misokatra – kintana-5: https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html